Tag: kutenga online | Martech Zone
Tag: kutenga online
Kwerinopfuura gore, vatengesi vanga vachitarisana nedenda rekukanganisa pakutengesa uye zvinoita sekunge musika wakagadzirirwa kusangana neimwezve mwaka unonetsa wekutenga zororo muna 2021. Kukanganisa kwekugadzira nekutengesa zvinhu kuri kuramba kuchikanganisa kugona kuchengeta zvinyorwa. yakavimbika mudura. Zvirongwa zvekuchengetedza zvinoramba zvichitadzisa vatengi kubva mukushanya muchitoro. Uye kushomeka kwevashandi kunosiya zvitoro zvichitatarika kana zvasvika pakushandira vatengi vano
Hapana-munhu angadai akaziva kuti apocalyptic mhedzisiro COVID-19 yaizove nehupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hupfumi uye kunyanya kushambadzira nekuvharwa kwevakawanda vanotungamira epamugwagwa zvitoro. Yakagadzirwa mhando, vatengesi, uye vatengi vese vanofungisisa ramangwana rekutengesa zvakare. Runako Matches Injini Runako Matches Injini ™ (BME) mhinduro kune vakanaka vatengesi, e-tailer, zvitoro, vagadziri vevhudzi, uye zvigadzirwa. BME inyowani chena-yakanyorwa AI-based personalization injini iyo inofungidzira uye inogadzirisa chigadzirwa